Football Khabar » रोनाल्डोले ‘हेडिङ गर्न नपाउने’ गरी प्रतिबन्ध लगाउन फिफासँग माग !
रोनाल्डोले ‘हेडिङ गर्न नपाउने’ गरी प्रतिबन्ध लगाउन फिफासँग माग !
एजेन्सी, पुस ४
इटालियन सिरी ए फुटबलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले दुई दिनअघि गरेको एक हेडिङ गोलको चर्चा अहिले चुलीमा छ । अवे मैदानमा युभेन्टसले साम्पडोरियाविरुद्ध १–२ को जित निकाल्दा रोनाल्डोले टिमका लागि विजयी गोल गरेका थिए । रोनाल्डोको सो गोलले टिमलाई खेल र ३ अंक जिताउँदै लिगको शीर्ष स्थानमा पनि राख्यो ।
ब्राजिलियन खेलाडी एलेक्स सान्ड्रोले मैदानको तल्लो भागबाट बक्समा दिएको हवाई गोल हेडिङ गर्न दौडिएर बक्समा पुगेका रोनाल्डोले जादुयी तरिकाले गोल गरे । साम्पडोरियाका दुईजना डिफेन्डबार बीचबाट उफ्रिएका उनले हावामा उड्दै हेडिङ मात्रै गरेनन्, गोल पनि गरे । अन्ततः सोही गोलले टिमले खेल जित्यो । सो खेलमा सान्ड्रोले रोनाल्डोलाई अघि पाउलो डिबालाको दर्शनीय भली गोलमा पनि उस्तै तरिकाले असिस्ट गरेका थिए ।
भुइँबाट २.५६ मिटर जम्प, १.५० सेकेन्ड हावामै !
उमेर ३४ वर्ष पुगेका रोनाल्डोको आफ्नो उचाइ १.८७ मिटर छ । तर, उनले सो हेडिङ गोल गर्दा २.५६ मिटर उफ्रिए । रोनाल्डो आफ्नो उचाइभन्दा निकै माथि हावामा उडेका थिए ।
स्वास्थ्य विज्ञानका अनुसार सामान्य मानिस बढीमा १ मिटर उचाइसम्म उफ्रिन सक्छन् । खेलाडी वा सम्बन्धित विधागत खेलाडीहरू बढीमा १.५० मिटरसम्म उफ्रिन सक्छन् । हाजसम्म खेलकुदमा कुनै पनि खेलाडीले १.५० मिटरभन्दा माथि उफ्रिएको रेकर्ड छैन । तर, रोनाल्डोले गत राति गोल गर्नेक्रममा २.५६ मिटर उफ्रिए । र, स्वास्थ्य विज्ञानलाई पनि चकित पारिदिए । सो गोलमा रोनाल्डोको ‘एयरिङ जम्प’ले थुप्रैलाई जिब्रो टोक्न बाध्य बनाएको छ । रोनाल्डोले हावामा २.५६ मिटर उडेर गोल गर्दा १.५ सेकेन्डसम्म हावामै थिए ।
रोनाल्डोमाथि हेडिङ गर्न प्रतिबन्ध लगाउन माग !
रोनाल्डोले सनसनीपूर्ण हेडिङ गोल गरेपछि थुप्रै खेलाडी, प्रशिक्षक र समर्थकहरूले रोनाल्डोको हेडिङ गोलको तारिफ गर्दै रोचक र रमाइला प्रतिक्रिया दिएका छन् । सामाजिक सन्जालहरूमा रोनाल्डोको हेडिङ गोलका विभिन्नखाले ‘इडिट’ गरिएका तस्बिर भाइल भइरहेका छन् भने गोलको भिडियो क्लिप लाखौंको संख्यामा सेयर भइरहेको छ ।
इंग्ल्यान्डका लिजेन्ड खेलाडी ग्यारी लिंकरले ट्वीटरमा रोनाल्डोको गोलको तारिफ गर्दै लेखेका छन्– ‘एकदमै अद्भुत् । मैले थुप्रैपटक फुटेज हेरिसकें तर मलाई अझैं पत्याउन कठिन भइरहेको छ । क्रिस्टियानो ! दुनियाँलाई चकित पार्न छाड !’
रोनाल्डोको हेडिङ गोलका कारण टिम हारेपछि साम्पडोरियाका प्रशिक्षकले खेलपछि सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘भन्नलाई शब्द छैन । मैले पहिलोपटक यस्तो देखें । क्रिस्टियानो जमिनभन्दा बढी हावामै थिए । मलाई लाग्दैन, उनी जहाज वा चरा हुन् ।’
रोनाल्डोका ठूला फ्यान इंग्लिस क्लब टोटनह्यामका दक्षिण कोरियन खेलाडी सन हेङ–मिनले रोनाल्डोको हवाई हेडिङ गोल गरेको केहीबेरपछि ट्वीटरमा विमान उड्दै गरेको इमोजी राखेर लेखेका छन्– ‘यो सिआर सेभेन एयरवेज हो ।’
यता, ट्वीटरमा विभिन्न फुटबल समर्थकहरूले अबदेखि रोनाल्डोले मैदानमा हेडिङ गर्न नपाउने गरी फिफाले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भन्दै रोचक प्रतिक्रिया दिएका छन् । एक फ्यानले लेखेका छन्– ‘फुटबलमा यस्तो दृश्य देखिनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनसक्छ । तसर्थ फिफाले रोनाल्डोले अबदेखि हेडिङ गर्न नपाउने गरी तत्कालै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति ४ पुष २०७६, शुक्रबार २०:४८